तपाइले ,आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुने व्यक्ति, जति पीडा भएपनि सहेरै बस्छन् – News Nepali Dainik
बिहिबार २१ साउन २०७८
हिमानी-पारसका छोरा हृदयेन्द्र शाह उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका जाँदै !
हात काटेर मन्दिरमा खुनको सिन्दुर लगाइ दिएका यि शिक्षकले अहिले आएर बिचल्ली बनाएपछि रुँदै मिडियामा आइन यि महिला
१४ वर्षमा साढे ९ हजार श्रमिक बाकसमा फर्किए
सार्किको छोरी बिहे गरिस भनेर घरबाट निकाली दिए। एक हप्ता देखी भोकै ।।
बेहुली लिन हिडेक विवाहको जन्तीमाथि च’ट्या’ङ पर्दा १७ को मृ’त्यु, १४ घा’इ’ते
नेपालमा दुर्लभ घटना : सोमिकाले जन्माइन् एकै पटक ५ वटा बच्चा
तपाइले ,आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुने व्यक्ति, जति पीडा भएपनि सहेरै बस्छन्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०४, २०७७ समय: १५:०४:५०
सायद संसारमा यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् होला जो अरुको नियन्त्रणमा आफ्नो जीवन बिताउन चाहान्छन्।
तर प्रायः हर कोहीलाई थाहा छ कि परिस्थिति अनुसार आफुलाई कहिले नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन, बरु उल्टै परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ। तर हाम्रो इच्छा अनुसार जीवन चल्छ भन्ने आवश्यक हुँदैन। व्यावहारिक जीवनमा सधै आफुले सोचे जस्तो हुँदैन।
जब चीजहरु हाम्रो अनुसार चल्दैन अथवा हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन, आफुले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि आफुलाई नै नराम्रो हुन जान्छ जस्तै, काम इमान्दारीका साथ गर्दा पनि कामबाट निकाल्ने, ब्रेकअप हुने (जुन आजको पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो), वा कुनै अन्य समस्याहरु आउदा जो केही यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्।
जसले लगनशीलताका साथ सबै समस्याहरुको सामना गर्छन् भने कतिपय त्यस्ता मानिसहरु पनि हुन्छन् जसले समस्याको अगाडि आफ्नो घुँडा टेक्छन्। तर केहि यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्, जो आन्तरिक रूपमा जति विचलित भए पनि संसारलाई यस्तो देखाउछन् कि केही पनि भएको छैन ‘ जस्तो कि सबै ठीकठाक छ।
अब यी व्यक्तिहरु को हुन् भनेर चिन्न कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दैन। किनकी राशि अनुसार थाहा हुन्छ कि को हुन् ती व्यक्ति जसले आफैमा धेरै दुस्ख लुकाए पनि, अझै पनि संसारको सामु हाँसिरहेका छन्। आउनुहोस् राशि अनुसार ति साहसी व्यक्तिहरुका बारेमा चर्चा गरौ। यी साहसी नै हुन् किनकि दुःख लुकाउन त्यति सजिलो हुदैन।
ती व्यक्ति जसले आफ्नो पीडा लुकाउँछन्, यस सूचीमा पहिलो नाम कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरु परेका छन्। यदि तपाईले कहिले कर्कट राशि भएका व्यक्ति भेट्नु भयो भने, तपाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि उनिहरु धेरै भावनात्मक र संवेदनशील हुन्छन्। साथी वा प्रेमी छनोट गर्ने बेला, उनिहरु निकै समय लगाउछन्।
कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरु आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई दुस्खी देख्न सक्दैनन्। न त उनीहरु आफ्नो दुख अरुलाई भन्न रुचाउछन्।
उनीहरु विश्‍वास गर्छन् कि संसारको अगाडि आफ्नो दुस् ख पोखेर केहि फाइदा हुदैन। त्यसैले जति नै दुख पिडा भए पनि उनीहरु सहजै मुस्कुराउँछन्। तपाई अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न कि उनीहरुको मनमा के चलीरहेको छ।
धनी बन्ने इच्छा छ ? धर्माशास्त्र भन्छ : जिन्दगीमा गर्दै नगर्नुहोस् यी…
श्रीमान श्रीमतीले कहिल्यै नगर्नुहोस् यी पाँच गल्ती, नत्र बर्बाद…
कन्या राशिका व्यक्तिहरु आफूलाई निकै सचेत बनाउँदछन्। उनीहरु आफ्नो कुरा सधै गोप्य नै राख्न रुचाउछन्। उनिहरु आनन्दित वा दुस्खी, उदास वा आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा उनिहरुलाई देखेर वा भेटेर अनुमान गर्न सकिदैन।
कन्या राशिका व्यक्तिहरु सँधै आफैमा अभाव भएको महसुस गरि रहन्छन्। उनीहरुको जतिनै तारिफ गरे पनि अथवा उनिहरु सहि नै हो भने पनि, उनीहरुलाई भित्री मनबाट स्वयं त्यस्तो नलागेसम्म वा सन्तुष्ट नभएसम्म उनिहरु अरुको कुरामा विश्वास गर्दैनन्।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू धेरै सामाजिक हुन्छन। तर उनिहरूको विश्वास जित्न निकै गाह्रो हुन्छ। न त उनीहरु आफ्नो खुशी अरुको अगाडी राख्छन्, न त आफ्नो दुःख कसैलाई सुनाउछन् ।
वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरु आन्तरिक रुपमा निकै फरक हुन्छन्। आफूभित्र जत्तिनै उदासिनताले घेरेको भए पनि उनीहरू कसैलाई पनि आफ्नो अवस्थाको बारेमा थाहा हुन दिदैनन्।
उनिहरू आफैसँग सन्तुष्ट हुन्छन् र सोच्छन् कि उनीहरूको समस्या उनीहरु आफैले बाहेक अरुले समाधान गर्न सक्दैनन्। तसर्थ, आफ्नो समस्याहरु संसारको अगाडी राख्न उपयोग ठान्दैनन् र आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुले जुनसुकै परिस्थितिहरुलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्। उनीहरुलाई यो राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि उनीहरूको समस्यालाई अरुको आकर्षणको केन्द्र बनाएर कुनै फाइदा छैन।
त्यसैले उनिहरु यस्तो कुराबाट टाढै बस्छन् र आफ्नो मन भित्र भएको कुरा अरु व्यक्तिले थाहा पाउलान् कि भनेर सचेत रहन्छन्।
उनीहरुले आफ्ना भावनाहरु कहिल्यै देखाउँदैनन्। जबसम्म उनीहरु आफैले भन्दैनन् कि उनीहरु खुशी छन् वा दुस्खी तबसम्म कुनै पनि कुराको अनुमान गर्न निकै कठिन हुन्छ।
Last Updated on: February 16th, 2021 at 3:04 pm
३९५ पटक हेरिएको
रोएका पूजा र आकाश मिलेर आए, भयो बिहेसम्मको कुरा (भिडियो)
कर्णालीमा पुल बनाउने गुमनाम पात्र : जसको मृ’त्युको कारण ४८ वर्षसम्म रहस्यमै
५ वर्ष कान्छा युवकसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेपछि जबरजस्ती बच्चा फालियो, श्रीमतीको बिचल्ली
कुच्चिएको थोत्रो चम्चाले चम्कियो भाग्य, ३० रुपैयाँमा किनेको चम्चा ४ लाखमा बिक्यो